Fanararaotana valan'aretina :: Andian’olona mitety trano misoloky ho mpitsabo • AoRaha
Fanararaotana valan’aretina Andian’olona mitety trano misoloky ho mpitsabo
Nisehoana fisolokiana amina fitsaboana ny aretina “coronavirus”, teny amin’iny faritra Ankaraobato Tanjombato iny, omaly. Milaza ho mpitsabo ny andian’olona nandondona tao amina trano iray teny an-toerana.
“Nahita fiara iray mampiahiahy ny polisy teo amin’ny manodidina ka nanatona hanontany. Niverina niditra tao anaty fiara haingana ary nirifatra nandositra ireo olona niaraka tamin’io fiara io. Nanon taniana avy eo, ny tompon-trano. Nilaza iretsy farany fa mpiasan’ny fahasalamana, hono, ireo tonga tao amin’izy ireo ireo. Tsy mbola tafiditra tao an-trano kosa ireo mpisoloky”, hoy ny avy amin’ny Polisim-pirenena.
Io tranga iray io ihany, hatreto, no hita sy voarain’ny avy ao amin’ny Polisim-pirenena. Tsy nisy ihany koa ny voasambotra. Hamafisina fa ahitana mpitandro filaminana sy mpiasan’ny fahasalamana ireo fiara manokana ampiasaina amin’ny fanentanana amin’ny fisorohana ny fihanaky ny “coronavirus”.
“Aoka ho mailo ny tsirairay, indrindra ireo arahimaso sy anaovana fizahana any an-trano. Miantso sy mampandre mialoha an’ireo olona hozahana fahasalamana ny tompon’andraikitra, alohan’ny handehanana eny an-toerana. Fiara avy any amin’ny ivon-toerana fibai – koa na ny “Covid-19” (CCO) izay misy marika manokana no ampiasaina. Aoka hampandre ny mpitandro filaminana haingana isika izay mahita tranga hafa mifanohitra amin’ireo voalaza ireo”, araka ny fanentanana nataon’ ny polisim-pirenena.
Firehetana teny Namontana Vehivavy lehibe, 86 taona, may tao an-tranony
Voina an-dranomamy :: Olona telo tsy hita popoka navadiky ny lakana lehibe